Thwebula Glary Utilities 5.68 Standard futhi Pro – Vessoft
Thwebula Glary Utilities
Glary Izinsiza – a set of amathuluzi ngezifiso, ihlanzekile futhi nokwandisa uhlelo lokusebenza. Isofthiwe iqukethe iqoqo amathuluzi for the control computer, nokwenza inkumbulo lokubhalisa. Glary Izinsiza uyakwazi khipha isofthiwe, ukubuyisela amafayela, ngemfihlo futhi ukususa ukubhala idatha. Futhi isofthiwe ikuvumela ukuba esehlukanisa futhi uhlangane amafayela enkulu, ukucinga impinda lwamafayela, ukususa amafayela complitly. Glary Izinsiza has a esibonakalayo elula futhi enembile.
Ukubeka up uhlelo lokusebenza
Ukulungisa amaphutha ohlelweni ebhukwini
Cinisekisa sokuqalisa izinto
Amazwana on Glary Utilities:
Glary Utilities Ahlobene software:
System nokwenza Ithuluzi elinamandla ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlanze uhlelo off amafayela okungadingekile kanye aqhube nokususwa okuphelele software.
System nokwenza Imidlalo Ithuluzi ngcono ukusebenza uhlelo nokwandisa Gameplay. Isofthiwe ikuvumela ukuba afeze nokwenza kwimodi okuzenzakalelayo noma manual.
English, Français, Español, Deutsch... CCleaner 5.26.5937 Standard, Professional futhi Portable
System nokwenza A isofthiwe ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukususa idatha ebhukwini bese uhlanza Umlando womsebenzi internet.
System nokwenza Ithuluzi nokwandisa futhi ukwandisa ukusebenza ohlelweni. Isofthiwe ikuvumela ukuba ahlanze uhlelo aphume amafayela okungadingekile kanye silungise izinkinga ebhukwini.
English, Українська, Français, Español... YAC 6.7.116
System nokwenza Ithuluzi ephelele ukwenza ngcono ukusebenza ohlelweni. Isofthiwe uyakwazi ukususa udoti uhlelo, ukuvikela ukuvimba izikhangiso.
Abanye Isofthiwe ukuze siqaphe izenzo abasebenzi computer ngesikhathi besebenza. Isofthiwe ubonisa izibalo umsebenzi kanye ukukhiqiza abasebenzi.